Home EUROPEAN FOOTBALL STORIES Ndị egwuregwu bọọlụ France Aymeric Laporte Child Story Plus Ihe na-emeghi ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Bull kasị mara amara na aha njirimara; "Agha". Anyị Aymeric Laporte Ụmụaka Akụkọ nke a na-eme ka ị nweta akụkọ zuru ezu nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndụ ezinụlọ na OFF-Pitch Facts banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike nchebe ya, mana ole na ole na-ele Aymeric Laporte Bio nke na-akpali mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi malite.
Aymeric Laporte Child Story Plus Ihe na - emeghi ka ihe omuma -Ndụ mbido
A mụrụ Aymeric Laporte na ụbọchị 27th nke May 1994 na Agen, France. A mụrụ ya na egwuregwu ịgba egwu na-akpọ nna na nne na-egwu egwuregwu.
Laporte malitere ịkụ football na rugby mgbe ọ dị afọ ise ma malite mmepe ya na SU Agen Youth Football Club. Na 2009, a kpọrọ ya ka ọ sonyere Athletic Bilbao mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, agbagha arụmụka ma ọ bụrụ na ọ bịanyere aka n'akwụkwọ nkwado zutere iwu nke iwu ha. Ọbụna n'oge a, enwere ya dịka nwata ka ọ kwaga France. Nke a mere ka ọ nọrọ oge na Aviron Bayonnais FC.
Ọ na-esonyere Athletic Bilbao na 2010 mgbe ọ dị afọ 16, ọ bụ nanị onye ọkpụkpọ French nke abụọ-nke bi Bixente Lizarazu - iji kpọọ ha, na-aga n'ihu iji hụ na ọhụụ 200 maka ụlọ ọrụ ahụ na ịghọ onye na-enweghị atụ. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Aymeric Laporte Child Story Plus Ihe na - emeghi ka ihe omuma -Ndụ mmekọrịta
Aymeric Laporte na-akpachapụrụ onwe ya na Spanish, Sara Botello onye na-agba egwú site na ọrụ.
Ha abụọ zutere n'oge mbụ ya na Athletic Bilbao. Ọ bụ Sara na ezinụlọ ya nyeere Aymeric Laporte aka na Spain. N'okpuru ebe a ka Sara Botello na-eme ihe ọ maara otú e si eme ihe kacha mma.
Ogo oge bụ oge nke Aymeric na Sara na-emekọ ọnụ na-eme ka ha nwekwuo mmetụta, ka ha jikọọkwuo ma hụkwuo ibe ha n'anya.
Mmekọrịta ha bụ nke ha na-ekekọrịta obi ụtọ ma ọ bụghị ịchọta ya. Ọ bụ naanị oge tupu ha ejiri eriri ahụ kee.
Aymeric Laporte Child Story Plus Ihe na - emeghi ka ihe omuma -Ndụ Ezinụlọ
Aymeric Laporte malitere site na otu ndị French na mbụ tupu a kwụọ ụgwọ ịgba akwụna.
Nne na nna ya, Mr na Mrs Laporte bụ ndị egwuregwu bara ọgaranya. Dị ka e kwuru na mbụ, mama ya bụ ndị na-agba ọsọ mgbe nna ya bụ kpakpando ịgba chaa chaa. Ọbụna nwanne ya nwoke na nwanne ya nwoke na-egwu bọlbụ ruo ọtụtụ afọ. Aymeric n'onwe ya malitere dị ka onye na-eti ihe tupu ya aghọọ onye na-agbachitere ya.
Aymeric Laporte Child Story Plus Ihe na - emeghi ka ihe omuma -Ndụ nke Onye
Aymeric Laporte nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Ike Aymeric Laporte: Ọ dị nwayọọ, na-ahụ n'anya, na-achọ ịmata ihe, na-eme mgbanwe, na-enwe ike ịmụta ngwa ngwa ma hụkwa n'anya ịgbanwe echiche.
Aymeric Laporte nke adịghị ike: O nwere ike inwe ụjọ na enweghị isi. Karia nke a, nke na-ekwekọghị ekwekọ, enweghi obi abụọ mgbe ọ na-adịghị eguzosi ike.
Ihe Aymeric Laporte mmasị: Egwú, akwụkwọ, magazin, mkparịta ụka na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla, njem dị mkpirikpi n'obodo ahụ
Ihe Aymeric Laporte achọghị: N'ịbụ onye naanị ya, ịbụ onye a na-ejigide, ikwughachi ugboro ugboro.
Na nchịkọta, Aymeric dị mma, nkwurịta okwu ma dị njikere maka ntụrụndụ, na-enwe mmetụta nke mberede na-adị njọ, na-eche echiche ma na-enweghị ike.
Aymeric Laporte Child Story Plus Ihe na - emeghi ka ihe omuma -Ya arụsị
Laporte na-egwuri egwu dị ka onye na-egbu ya n'oge ọrụ ya ma ghọọ onye na-akwadobu Wiltord na Arsenal na France mgbe nke a nọ na akwụkwọ Bordeaux.
"Amalitere m dị ka onye na-eti ọkpọ, akwụsịrị m asatọ ugboro asatọ dị ka onye nchịkọta ihe mgbaru ọsọ kasị elu ná ntụrụndụ niile ahụ," Laporte kwuru. "Enwere m ọtụtụ arụsị ma ha abụghị kpakpando. Mgbe m dị obere, enwere m mmasị nke ukwuu maka onye na-egwu Girondins de Bordeaux, nke bụ ndị m kwadoro. Ọ bụ Sylvain Wiltord. Enwere m ya Wiltord jersey. Enwere m mmasị [onye mbụ na-asụ Portuguese na onye gara aga Bordeaux] Pauleta. Emere m ihe mgbaru ọsọ dị ka ya. "
Aymeric Laporte Child Story Plus Ihe na - emeghi ka ihe omuma -Akụkọ Mgbaghara
Onye siri ike, onye dị elu ma dị ike nke na-akwado onye na-agbachitere egwu nwere ntachi obi dị ole na ole na ọrụ ya.
Na May 2013, Laporte nwere ịwa ahụ ikpere n'ikpe iji mezie mịsiscus dị ọcha, ebe ọ na-ata ahụhụ dịka aka ọjọọ ya n'oge gara aga.
Nnukwu mbido a mere na March 2016, mgbe ọ tara ahụhụ na ụkwụ ụkwụ ya na-adaghị ada mgbe ọ na-egwu France n'okpuru 21s. Ihe ọjọọ ahụ chịrị ya maka oge fọdụrụnụ oge wee hapụ ya enweghị ihe ọ bụla maka nhọrọ maka Euro 2016.
Aymeric Laporte Child Story Plus Ihe na - emeghi ka ihe omuma -Nchere maka France
Laporte na-egwuri egwu n'oge ntorobịa ọ bụla maka France, ọbụna na-achịkwa U21 n'akụkụ, ma ọ ka ga-eme ka ọ bụrụ onye mbụ ya na ndị agadi.
Spain chọrọ Laporte ka ọ bụrụ onye na-eme egwuregwu tupu France akpọ ya na September 2016 maka egwuregwu abụọ nke World Cup. Ọ pụtaghị n'egwuregwu ọ bụla, ma ọ bụ mgbe ahụ ka ọ na-ekwu na ya bu n'obi ịkpọ Les Bleus.
"Anọ m na-echere ịkpọ oku ruo ogologo oge," ka o kwuru n'oge ahụ. "Ọ bụ ihe m rọrọ banyere. Amaara m na m ga-anọgide na-anọgidesi ike na ịdị umeala n'obi. Ị nwere ike ịsị na ndị otu mba Spain chọrọ ọrụ m. Echeghị m na m ga-egwu maka Spain. Ana m edozi anya mgbe niile, m na-ekwukwa mgbe niile na ọchịchọ mbụ m bụ iji kpọọ France. "
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị Aymeric Laporte Child Story tinyere akụkọ eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n'isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.
Bọchị gbanwee: Eprel 28, 2020